ေြကာက်တတ် ဝန်ကင်း | ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား
at Monday, June 20, 2011 – 12 မှတ်ချက်ေလးေတွ
အန္တရာယ်ကို ြကိုတင်​ေတွး​ဆ၍ ​ေြကာက်တတ်​ေသာသူသည် ​ေဘး​အန္တရာယ် ကင်း​ေဝး​သည်။ ​ေြကာက်လျှင် လာဘ်လွဲ၊​ ရဲလျှင် လာဘ်ရ-နှင့်​ နှိုင်း​ယှဉ်။
"​ေြကာက်တတ်မှသာ ဝန်ကင်း​မည်ြဖစ်​ေသာ​ေြကာင့်​ လှည်း​ေပါ်သို့​မတက်ဘဲ…လှည်း​အနီး​မှ ​ေြခကျင်လိုက်ပါသွား​ေလသည်။ " စာအုပ်။
"​ေြကာက်တတ်လျှင် ဝန်ကင်း​ သည်ဆို​ေသာ ဆိုရိုး​တစ်ရပ်ရှိရာယင်း​စကား​၏သ​ေဘာမှာ စင်စစ်အြပစ်ရှင်း​ ရန်ကင်း​ေစလိုြခင်း​နှင့်​သက်ဆိုင်သြဖင့်​များ​စွာ အဖိုး​တန်​ေလသည်။ " လူအနှစ်။
Khin Nyein Htun via Facebook says:
ဘာမွလည္းဖတ္လို႔မရ (ထား၀ယ္အသံႏွင့္ေျပာျခင္း) :P
ျမန္မာစာ ျမန္မာစကား via Facebook says:
မူရင္း စာမ်က္ႏွာ မွာ သြားဖတ္လို႕ရပါတယ္။ :)
Super ionrfmatvie writing; keep it up.
BION I'm impreessd! Cool post!
Wow, that'sareally clever way of thkninig about it!
Yo, that's what's up ttrhufully.
That addresses sveeral of my concerns actually.
With the bases ldoead you struck us out with that answer!